Fampidirana ny RJ45 Interface ho an'ny telefaona an-telefaona-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Fampidirana ny RJ45 Interface ho an'ny telecom an-tariby indostrialy
FIAINANA: 2021-04-06 HITS: 8
Ny interface RJ45 dia mazàna ampiasaina amin'ny fampitana data, ary ny fampiharana mahazatra indrindra dia ny interface interface card. RJ45 dia karazana mpampifandray isan-karazany (ohatra: RJ11 dia karazana mpampitohy ihany koa fa amin'ny telefaona no ampiasaina).
Inona ny RJ45 ?
Ny interface RJ45 no mpampitohy mpivadika twisted mahazatra indrindra ho an'ny tariby Ethernet sy tamba-jotra. Ny "RJ" dia midika hoe "jack voasoratra anarana", izay tambajotram-pifandraisan-davitra mifandraika amin'ny serasera mba hampifandraisan'ny fitaovana am-peo sy data ny serivisy omen'ny mpitatitra fifanakalozana eo an-toerana na mpitatitra lavitra. Ny mpampitohy ara-batana ampiasain'ny jacks voasoratra anarana dia ny mpampitohy modular sy ny karazana mpampitohy fantsona 50-pin kely indrindra. Ny mpampitohy RJ45 dia plug sy maotera 8-position, 8-contact (8P8C), izay matetika ampiasaina hampifandraisana solosaina amin'ny tambajotram-paritra misy eo an-toerana (LAN). Ny jiro tariby RJ45 dia matetika vita amin'ny plastika misy tsimatra valo amin'ny seranana. Ny efatra amin'ireo tsimatra dia ampiasaina amin'ny fandefasana sy fandraisana data, ary ny efatra hafa dia ampiasaina amin'ny haitao hafa na fitaovana fampitana herinaratra.
T568A na T568B Fametrahana fenitra
T568A sy T568B no kaody loko roa ampiasaina amin'ny plug-n modular miisa valo toerana. Samy avela ao ambanin'ny fenitra tariby ANSI / TIA / EIA. Ny hany mampiavaka azy ireo kaody loko roa dia ny mpivady volomboasary sy maitso dia mifanakalo.
Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny fifindrana eo amin'ny teti-pitaterana T568A sy T568B. Ny tian'i Amerika Avaratra dia ny T568B. Ny sisiny roa dia tsy maintsy mampiasa fenitra mitovy. Tsy misy mahasamihafa azy amin'ny toetran'ny fampitana data.
Ny lamina tariby T568B dia ekena ho ny maodelin'ny tariby tianao.
Mametaka RJ45 amin'ny famaritana T568B
Rehefa tariby ny mpampitohy dia araho ny fisehoana aseho. Ny mpampitohy anao dia hanaraka ny fenitra T568B.
Mampiasà fitaovana crimping tsara kalitao miaraka amin'ireo mpampitohy kalitao.
Ningbo Joiwo Ny explosionproof dia miavaka amin'ny telefaona indostrialy mandritra ny 15 taona mahery.
Ny telefaona dia afaka mifidy amin'ny karazana Analog na VOIP karazana. Ampiasainay ity interface RJ45 mijoro ity ho an'ny telefaonintsika izay azo ampiasaina amin'ny Rafitra VOIP / SIP / IP.
Ampidiro ny IP VOIP SIP antso an-tsisin-tànana Response System Emergency Telephone Call Box JWAT414
Fa maninona no maharary ny toekarena manerantany ny fanakanana ny lakandranon'i Suez?